Brendan Taylor consolidates for Zimbabwe on Day 2 of Harare Test - Cricket Country
Brendan Taylor remained unbeaten on 135 and Graeme Cremer was batting on 20, as Zimbabwe consolidated their position by reaching 285 for six at lunch on the second day of the opening Test against Bangladesh.
| Updated : April 18, 2013 4:05 PM IST
Brendan Taylor Taylor continued to bat with ease against the Bangladesh bowling attack © AFP
Zimbabwe resumed their first innings at 217 for four and added a further 68 runs, losing the wickets of Elton Chigumbura and Richmond Mutumbami for 12 and 11, respectively.
However, the Zimbabwe skipper Taylor continued to bat with ease against the Bangladesh bowling attack, adding another 28 runs to with overall score in the first session.
Earlier on the opening day, a defiant, unbeaten century from captain Brendan Taylor allowed Zimbabwe to build a solid platform on a sluggish first day of the first Test against Bangladesh at Harare Sports Club.
Brief Scores: Zimbabwe 285 for 6 (Brendan Taylor 135*, Malcolm Waller 55; Robiul Islam 3 for 68, Rubel Hossain 2 for 70) vs Bangladesh
Last updated on April 18, 2013 4:05 PM IST